Interview – Page3– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक अग्रणी व्यक्तित्व जगतबहादुर श्रेष्ठ तपाईद्वारा अभिनन्दित हुने कार्यक्रम तय भएको रहेछ, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ? एकदमै प्रशंसनीय कार्य लाग्यो, वहाँजस्तो प्रतिष्ठित सहयात्रीलाई अभिनन्दन गर्न पाउनु म आफैंमा गौरवान्वित भएको महसुस हुन पुगेको छ । तपाई र अजगतबहदुर श्रेष्ठको राजनीतिक सहकार्य बारे केही बताइदिनुस् न । राजतन्त्रात्मक पञ्चायती कालरात्रीमा राजनीतिमा […]
Posted in: Interview, mainNews
काठमाडौंको अहिलेको राजनीतिक गतिविधि कसरी हेरिरहनु भएको छ ? दुईतिहाई भनिएको नेकपाको सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको पाएको छु काठमाडौं पस्ने वित्तिकै । सरकार निर्माणको यति छोटो अबधिमा निकम्माको पगरी गुथेर भइरहेको यस्तो विरोध आफैमा अनौठो छ । अर्को आश्चर्य त के पनि रहेको छ भने यो आलोचना प्रतिपक्षले गरेका छैनन् । बरु जानकारहरु, विषय विशेषज्ञहरु […]
जीवन के हो ? जीवन एउटा यात्रा हो । जीवन यात्राका पनि क्रमहरु हुन्छन् । यात्रा शुभ पनि हुन्छ र अशुभ पनि । कहिले यात्रा फलादायी हुन्छ, कहिले यात्रा निष्फल । तर पनि जीवन निरन्तर यात्रामा अघि बढिरहन्छ । प्रयत्न त हुन्छन् नै । सफल भए पनि असफल भए पनि । यी प्रयत्नहरु संघर्षमय हुन्छन् […]
संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । काठमाडौं आफैंमा निकै विसाल र धेरै तहहरुमा विभक्त छ । अभियान कसरी लगिरहनु भएको छ ? हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय मुताविक उपत्यकामा संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । यस क्रममा हामीहरुले महानगरमा चारवटा इलाका र वरपरको काँठक्षेत्रका दशवटा नगरपलिकाहरुलाई आठवटा इलाकामा विभाजन गरेर १२ […]
जनयुद्ध गरेर घुमीफिरी उही संसदवाद आयो । विचारदर्शनमा सर्वहाराले वैचारिक अस्त्र र सर्वहारामा विचारदर्शनले भौतिक अस्त्र भेट्छ भनेको त भेटेन नि ? इतिहासमा के देखिदो रहेछ भने जुन वस्तु बाहिर देखिन्छ, भित्र त्यो त्यस्तै हुँदो रहेनछ । त्यो पहिचान हुन नसक्दा पहिचान गर्न र ठम्याउन नसक्दा ती पात्रहरु वा नेतृत्वकर्ताहरु अथवा आन्दोलन आफैमा गलत ठाउँमा […]
प्रतिष्ठानको सातौं प्राज्ञसभा भर्खरै सम्पन्न गर्नुभएको छ । प्रगतिका हिसाबले कस्तो अनुभूति भएको छ ? प्रतिष्ठानको प्रगतिका हिसाबले सातौं प्राज्ञसभाले एक निश्चित कार्ययोजनालाई अनुमोदन गरेको छ । यसले वार्षिक कार्ययोजनाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । यो बेलामा केही गुनासाहरु पनि आएका छन्, प्राज्ञिक कामहरु अघि बढाउन सकिएन भनेर । समस्या केले ल्यायो […]
अध्यक्षज्यु ! देशका सीमाका भूगोल त सबै बेचेर खाइसकेछ ओली सरकारले ? नेपाल भारत सीमा विवाद पहिले देखिको हो । सीमा विवादको विषयलाई लिएर हामीले लामो समयदेखि संघर्ष पनि गर्दै आएका छौं । भारत र भारतीय पक्षले योजनवद्ध रुपमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिइँदै आएको हो […]
Posted in: Feature News, Interview, mainNews
ओली सरकारको कारणले नेपाली समाज वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा बिचलनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ
अहिले नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसात्मक गतिविधि अलि बढिराखेको छ, यसलाई कसरी लिइराख्नुभएको छ ? नेपाली समाजमा जुन घटनाक्रमहरु पछिल्लो समय तब्रताका साथ बढिरहेको छ, यो निकै चिन्ताजनक खालको छ । समग्रमा यो आम सामाजिक सुरक्षाकै प्रश्न बनिरहेको छ । यसलाई राज्यले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । निकै कहालीलाग्दा घटनाहरुको श्रृंखला हेर्दाखेरि नेपाली समाज […]
संगठन विस्तारपछि हामी संघर्षका कार्यक्रमहरु लिएर अघि बढ्दै छौं
यो पछिल्लो समयमा संगठन विस्तारको अभियान देशैभरि चलिरहेको छ । काठमाडौंको विशिष्टतामा कसरी गइरहेको छ ? पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सांगठनिक सवालमा फेरि तीन महिने संगठन निर्माणको अभियान थप गर्यो । हामी काठमाडौं जिल्लाको बैठक बसेर यो तीन महिनाको थप संगठन निर्माणको अभियानलाई काठमाडौंको विशिष्ठताका अनुसार अगाडि बढाउने निर्णय गर्यौं । साउन महिना हामीले […]